दशैंमा मासु र रक्सी खाँदा सावधानी नअपनाए लाग्न सक्छ ‘दीर्घरोग’, कति र कसरी खाने ? - VOICE OF NEPAL
दशैंमा मासु र रक्सी खाँदा सावधानी नअपनाए लाग्न सक्छ ‘दीर्घरोग’, कति र कसरी खाने ?
२२ आश्विन २०७६, बुधबार १२:०५
काठमाडौं: हिन्दु धर्मावलम्बीहरूकाे महान पर्व दशैंमा प्राय: सबैले मासु खाने गरेका छन् । नहुनेले पनि ऋणपान गरेरै भए पनि दशैंमा मासु खानैपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर यस्तो पर्वमा मासु कति, कसरी र कस्तो खाने भन्ने सन्दर्भमा हामी खासै सचेत छैनौं ।
मासु पकाएर धेरै समय फ्रिजमा राख्दा पनि ब्याक्टेरियाको संक्रमण हुन सक्छ । भण्डारणको उचित वातावरण नमिल्दा पनि कतिपय अवस्थामा मासु खानयोग्य नहुने चिकित्सकको भनाइ छ । चाडपर्वका नाममा जथाभावी खाएर अस्वस्थ हुनु स्वास्थ्य बाधा मात्र होइन आर्थिक क्षतिका साथै परिवारका सदस्यका लागि हैरानीसमेत हो । त्यसैले मासुजन्य खानेकुरा खाँदा साबधानी अपनाऊ ।